Andro: 2 mey 2020
Eo ho eo amin'ny 20 tapitrisa eo ho eo no nandalo tamin'ny sisintany Tiorka
Torkia Antontan'isa Institute (tsi) eo amin'ny lafiny voalohany tamin'ny 2020, araka ny angona avy any amin'ny Andilan-dranomasin'i Istanbul dia izao 9 734 arivo sambo. 6 448 amin'ireo sambo ireo no nalain'ny mpanamory nandritra ny tetezamita. Ny halavan'ny 200 metatra [More ...]
Metromraniye Göztepe Metro ao amin'ny Service of Istanbulites tamin'ny 2022
Ny isan'ireo tranga koronavirus manerantany dia nanakatra 3 tapitrisa 370
Ny karazana coronavirus vaovao mipoitra ao Wuhan, faritanin'i Hubey any Shina, dia nifindra tany amin'ny 3 tapitrisa tapitrisa tapitrisa mahery manerana izao tontolo izao, miaraka amin'ny fahafatesany dia mahatratra 370 arivo. Tany Etazonia izay nisy ny valanaretina tratra indrindra [More ...]
55 tapitrisa Hozaraina Context Koronavirüsl Mask Horohoro ao Torkia
Ny filohan'ny serasera Fahrettin Altun dia nanambara fa 55 mason-tava no nalefa any amin'ny fivarotam-panafody ao anatin'ny faritry ny ady amin'ny coronavirus. Altun, ny haino aman-jery sosialy kaonty "Coronavirus any Torkia" tao amin'ny fanambarana ny anaram-boninahitra, mbola hitondra teratany vahiny ny firenena amin'ny sorona lehibe [More ...]
Fiaran-dalamby 7 Billion Euro Famerenam-bola amin'ny Air France
Ny governemanta frantsay dia nametraka "rel" hafa ho an'ny fampindramam-bola trosa 7 miliara-euro any Air France. Araka izany, raha manana mpandeha fiaran-dalamby ny mpandeha, dia angatahina ny fiaramanidina hampihena ny sidina an-dalambe. [More ...]
Fanaraha-maso Corona amin'ny trano fivarotana ..! Tsy misy toa ny taloha
Mandeha ny asa hanokafana trano fivarotana lehibe nikatona noho ny fihanaky ny tsimokaretina corona. Tao anatin'ny sehatry ny fandinihana, ny nahafantarana fa misy olona sasantsasany hisokatra amin'ny tranombarotra miantsena ary hisy fitaovana fandrefana tazo eo amin'ny fidirana. Fivoahan'ny virus virus [More ...]
Tiorka izay efa nitonona ny anarany amin'ny fitsaboana amin'ny izao tontolo izao
Tiorka izay mitarika ny siansa momba ny fitsaboana ary manoratra ny anarany amin'ny fanafody eto amin'izao tontolo izao. Dokotera any Göktürk, Biguta ao Haruks sy Haruna any Karluk dia anisan'ireo dokotera tsy hay hadino hatramin'ny taona 728 A.K. Ny lohahevitra momba ny boky ara-pitsaboana, Liver [More ...]
Ny fameperana momba ny curfew dia nivadika ho fotoana iray tao Kayseri
Kayseri Metropolitan Munisipaly, amin'ny fahafantarana ny fotoana hametrahana ny curfew, dia asphalting miasa eny an-dalambe miaraka amin'ny fihenan'ny fiara amin'ny andro mahazatra. Ben'ny tanànan'ny Metropolitan munisipaly, izay nitsidika ireo ekipa miasa tao amin'ny Sivas Street. Mamdouh [More ...]
Mijanona eo amin'ny làlana Bursa Merino dia havaozina
Tanànan'i Bursa Metropolitan, izay nanova ny làlamby ho lasa kisendrasendra tany Bursa ary nahavita ampaosy asphalt mafana 30 tapitrisa taonina tao anatin'ny tapa-bolana lasa, ary koa mandritra ny vanim-potoana fandrarana izay misarona ny 1-2-3 Mey. [More ...]
Ny fampahavitrihana ny rafitra S-400 nahemotra noho ny fipoahana
fiadidiana SözcüSpokebrahim Kalın dia niresaka tamin'ny tontolon'ny panontana mitondra ny lohateny hoe "Ny ho avin'i Idlib sy ny olona nafindra tany Syria" nokarakarain'ny filankevitra Atlantika DC monina any Washington. Ao anatin'ny fanambarana feno fahasambarana, Patriot of Erdogan sy Trump imbetsaka [More ...]
Hampiasaina voalohany amin'ity taona ity i UAV amin'ny famitana ny doro ala
Ny minisiteran'ny fambolena sy ny ala, ny Dirte générale de gestra (OGM) dia nahavita ny fiomanana hiadiana amin'ny doro ala. Eto amin'ny firenentsika, indrindra ny alàlan'ny ala amoron-tsiraka izay manomboka an'i Hatay ary miitatra avy any amin'ny faritr'i Mediterane sy Aegean mankany Istanbul. [More ...]
Ny hamafin'ny fampiasam-bola amin'ny faritra 3 avy amin'ny minisitry ny varotra Pekcan
Trade Minisitry Ruhsar Pekcan, vaovao karazana Coronavirus (Kovid-19) ny maha zava-dehibe ny dingan'ny digitalisation eo amin'ny ady amin'ny valan'aretina nanamarika fa indray mandeha indray kevitra, "Digitalization sy ny teknolojia ny fampiasam-bola mba ho any an-tsaha, fara fahakeliny, ho Torkia sy izao tontolo izao [More ...]
Nandritra ny hetsika izay nataon'ny ekipan'ny Ministeran'ny Varotra ho an'ny mpandraharaha ara-barotra ao İzmir, dia nahatratra 1 ny 15 litatra ny etilôma alikaola mitentina 117 tapitrisa TL, raha toa kosa, amin'ny andiany hafa ao amin'ny vavahadin'ny Customs Edirne Hamzabeyli. [More ...]
Nitsidika ny mpiasa Asphalt ny Filoha Soyer ary mankalaza ny andro 1 Mey ho an'ny mpiasa
Ny fitsidihan'ny Ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer dia namangy ireo mpiasa izay nametraka aspirasy tamin'ny 23.00 alina ary nankalaza ny 1 Mey, İşçi Bayram, ary nanompo azy ireo tamin'ny baklava. Ny ekipa manombana ny làlana mandritra ny làlambe dia tsy afaka mihidy tanteraka [More ...]
Tian'ilay masoivoho fizahan-tany teratany Korintiana
Ny ampahany tsara indrindra ao amin'ny faritry ny Isthmus Korintiana dia voafantina handavaka lakandrano. Ny fananganana azy dia eo anelanelan'ny 1881 sy 1893. Ny halavany dia manodidina ny 6,3 km ary mampifandray ny Golikan'i Korinto sy Saronika. Vazivazy Grika [More ...]
Amin'izao fotoana izao ao amin'ny Tantara: May 2 1943 andalana ny Zonguldak-Kozlu
Nomeny baiko ny fanamboarana ny lalamby Hejaz an'i Abdülhamid II tamin'ny 2 May 1900 teo amin'ny tantara. Sultan Abdulhamid; "Ho an'ny fananganana an'i Hatt-ı Mezkur, izay miorina amin'ny fanampian'andriamanitra Tsitoha sy ny fanampian'ny Mpaminany anay (SAV)." [More ...]